Aqoonyahan ka hadlay Golaha Deegaanka ee loo soo xulayo Garoowe (dhagayso) – Radio Daljir
Aqoonyahan ka hadlay Golaha Deegaanka ee loo soo xulayo Garoowe (dhagayso)
Abriil 10, 2018 12:04 g 0
Madaxweynaha Puntland ayaa wareegto uu soo saarey toddobaad ka hor waxaa uu ku kala diray golihii deegaanka ee degmada Garoowe, waxaana uu magacaabey guddoomiye cusub iyo kuxigeenkiisi kuwaas oo ah kumeel-gaadh.
Maadama uusan Puntland ka jirin hannaanka xisbiyada siyaasadda waxaa madaxweynaha sharciyadu siinaysaa inuu kala diro golihii wada shaqayn waaya.
Haddaba waxaa magaalada Garoowe ka socda soo xulista xubnaha golihii badali lahaa kuwii dhawaan la kala diray .
Maxamed Cali Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanada Puntland ayaa waxaa uu sharraxayaa nooca ay noqonaya xildhibaanada xiligaan loo baahan-yahay .
Wariyaheenna Magaaladda Garowe Axmed Sheekeeye ayuu ugu warramay Graoowe.
Dhalinyaro Afduub loogu haystay Garoowe oo Xoriyadooda helay (dhegayso)